Wax kasta oo aad u baahan tahay inaad ka ogaato ku saabsan marawaxada Francis iyo sida ay u shaqeyso | Cusbooneysiinta Cagaaran
Jarmal Portillo | | Tamarta Korontada
Mid ka mid ah cunsurrada sida weyn looga isticmaalo adduunka ee dhalinta tamarta koronto ayaa ah Marawaxadaha Francis. Waa mashiin turbo ah oo uu soo saaray James B. Francis wuxuuna ku shaqeeyaa falcelinta iyo socodka isku dhafan. Waxay yihiin mashiinnada haydarooliga ee awood u leh inay bixiyaan boodbooyin ballaaran iyo heerar qulqulka oo ka shaqeeya jaranjarooyinka u dhexeeya laba mitir illaa dhowr boqol oo mitir.
Qodobkaan waxaan kuugu sheegeynaa dhamaan astaamaha iyo muhiimada ay leedahay matoorka Francis.
2 Cavitation ee marawaxadaha Francis
3 Qaybaha marawaxadaha Francis
Mashiinka noocan ah ayaa awood u leh inuu ku shaqeeyo heerar aan sinnayn oo dherer ah oo ka bilaabma dhowr mitir illaa boqollaal mitir. Sidan oo kale, waxaa loogu talagalay inay awood u yeelato inay ku shaqeyso madax kala duwan iyo socodka. Thanks to xabagta waxtarka sare leh ee la dhisay iyo qalabka loo isticmaalay, qaabkani wuxuu noqon doonaa mid ka mid ah kuwa ugu isticmaalka badan adduunka. Adeegsigeeda ugu weyni waa dhinaca soo-saarista tamarta korontada ee dhirta korantada laga dhaliyo.
Tamarta korantada, sidaan ognahay, waa nooc ka mid ah tamarta la cusboonaysiin karo oo isticmaala biyaha ku jira haamaha si ay u dhaliyaan koronto. Marawaxadahaani waa kuwo aad u adag oo qaali ah in la naqshadeeyo si loo rakibo laakiin waxay shaqeyn karaan muddo tobanaan sano ah. Tani waxay ka dhigeysaa maalgashiga qiimaha bilowga ah ee noocan ah marawaxadaha mid ka sarreeya kuwa kale. Si kastaba ha noqotee, waa u qalantaa maaddaama maalgashiga hore uu awood u leeyahay inuu bixiyo sannadaha ugu horreeya. Sida tamarta sawir-qaadista ee aan ku isticmaalno baallayaasha ku shaqeeya cadceedda oo celcelis ahaan nolol faa'iido leh ay tahay 25 sano, waxaan dib u soo ceshan karnaa maal-gashigii inta lagu jiray sannadihii 10-15-kii sano ee la isticmaalayay.
Marawaxada Francis waxay leedahay naqshad hydrodynamic taas Waxay noo damaanad qaadeysaa waxqabad sare sababtoo ah xaqiiqda ah inay jiraan wax khasaaro ah oo biyo ah. Muuqaal ahaan way adagyihiin waxayna leeyihiin kharash dayactir oo hooseeya. Tani waa mid ka mid ah qodobada ugu faa'iidada badan ee noocan ah marawaxadaha tan iyo markii dayactirku ka hooseeyo iyo waxa yareeya kharashyada guud. Rakibida marawaxadaha Francis oo dhererkoodu ka weyn yahay 800 mitir laguma talinayo gabi ahaanba maadaama ay jiraan kala duwanaansho fara badan oo culeyska. Sidoo kale laguma talinayo in lagu rakibo noocan ah marawaxadaha meelaha ay ku kala duwan yihiin qulqulka qulqulka.
Cavitation ee marawaxadaha Francis
Daawashada faaruqintu waa arrin muhiim ah oo ay tahay inaan xakameyno waqti kasta. Waa saameyn hidde ah oo dhacda marka godad uumiga laga soo saaro biyaha dhex maraya marawaxadaha. Sida biyaha oo kale, waxay ku dhici kartaa dareere kasta oo kale oo ku jira xaalad dareere ah kaas oo ay wax uga qabato xoogagga ka jawaabaya kala duwanaanshaha niyadjabka. Xaaladdan oo kale, waxay dhacdaa marka dheecaanka uu xawaare sare ku maro cidhif af badan oo ay jiraan kala-goysyo u dhexeeya dheecaannada iyo ilaalinta joogtada Bernoulli.
Way dhici kartaa in cadaadiska uumiga ee dareeraha uu yahay qaab ay molikuyuullada isla beddeli karaan isla markaaba waxay uumi iyo tiro badan oo goobooyin ah ayaa la sameeyay. Xumbooyinkan waxaa loo yaqaannaa godad. Tani waa halka ay fikradda cavitation-ka ka timaaddo.
Dhamaan goobooyinkan u safro aagagga uu ka jiro cadaadiska sare iyo halka uu ku yar yahay cadaadiska. Intii lagu guda jiray safarkan, uumiga si lama filaan ah ayuu ugu noqdaa xaaladda dareeraha. Tani waxay keentaa in goobooyinku ay ku dambeeyaan burburin iyo jahwareer ayna soo saaraan raad gaas oo soo saara xoog badan oo tamar ah dusha sare oo dillaaci kara inta uu shilku socdo.
Waxaas oo dhami waxay naga dhigayaan inaan ku xisaabtano daloolinta marawaxadaha Francis.
Qaybaha marawaxadaha Francis
Marawaxadaha noocan ah waxay leeyihiin qaybo kala duwan mid walbana wuxuu u xilsaaran yahay dammaanad qaadka dhalinta tamarta korontada laga dhaliyo. Waxaan falanqeyneynaa mid kasta oo ka mid ah qaybahan:
Qolka muquuninta: Waa qayb ka mid ah marawaxadaha 'Francis' oo mas'uul ka ah inay si siman u qaybiyaan dareeraha marinka impeller-ka. Qolladan wareegga ahi waxay leedahay qaab snail waana sababta oo ah iskucelceliska xawaaraha dareeraha waa inuu ahaadaa mid joogto ah meel kasta oo ka mid ah. Tani waa sababta ay u noqonayso inay ahaato qaab muquunis ah iyo snail. Qaybta iskutallaabta ee qolkani wuxuu noqon karaa noocyo kala duwan. Dhinac, afargeesle iyo wareeg kale, wareegtadu waa tan ugu badan.
Predistributor: Waa qeyb ka mid ah marawaxadahan oo ka sameysan garbiyo go'an. Baalashaani waxay leeyihiin hawl dhismeed oo keliya. Waxay u adeegaan inay ilaaliyaan qaabdhismeedka qolka muquuninta ah ee aan kor kusoo xusnay waxayna siinayaan qallafsanaan ku filan si ay u awoodaan inay taageeraan dhammaan qaab dhismeedka hydrodynamic iyo yareynta khasaaraha biyaha.
Qaybiyaha: qaybtani waxaa lagu dhisay baabuur hage ah oo raacaya. Cunsurradan waa inay si ku habboon biyaha ugu hagaajiyaan xagga carbiyaha carbeed ee go'an Intaa waxaa dheer, qaybiyahan ayaa mas'uul ka ah nidaaminta socodka la ogol yahay marka uu marayo marawaxadaha Francis. Tani waa sida awoodda marawaxadaha loo beddeli karo si ay tahay in loogu hagaajiyo sida ugu macquulsan kala duwanaanta culeyska shabakadda korantada. Isla mar ahaantaana, waxay awood u leedahay inay hagto qulqulka dareeraha si loo hagaajiyo waxqabadka mashiinka.
Dareere ama rotor: waa wadnaha maraakiibta Francis. Tani waa sababta oo ah waa meesha ay isdhaafsiga tamarta ka dhexeyso mashiinka oo dhan. Tamarta dareeraha sida caadiga ah xilligan ay ku dhex marto mishiinka wax lagu shubo waa wadarta tamarta dareemayaasha, tamarta cadaadiska uu leeyahay iyo tamarta ka imaan karta dhererka. Mashiinka matoorka ayaa mas'uul ka ah inuu u beddelo tamarta tamarta korantada. Qalabka wax lagu duubo ayaa mas'uul ka ah gudbinta tamarta iyada oo loo marayo mashiinka koronto-dhaliye halkaasoo beddelka ugu dambeeya lagu fulinayo. Waxay yeelan kartaa qaabab kala duwan iyadoo kuxiran tirada gaarka ah ee kacaanka ee mashiinka loogu talagalay.
Tuubbada nuugista: Waa qaybta uu dareeraha ka soo baxayo marawaxadaha. Shaqada qaybtani waa in la siiyo sii socoshada dareeraha iyo soo kabashada boodboodkii ka lumay xarumaha ka sarreeya heerka biyaha. Guud ahaan, qaybtaan waxaa loo dhisay qaab fidiyaha si markaa ay u soo saarto saameyn nuugid ah oo gacan ka geysaneysa dib u soo kabashada qayb ka mid ah tamarta aan la gaarsiin rotor-ka.
Waxaan rajeynayaa in macluumaadkan aad wax badan kaga baran karto mashiinka marawaxadaha Francis.
Wadada buuxda ee maqaalka: Cusbooneysiinta Cagaaran » Tamarta dib loo cusboonaysiin karo » Tamarta Korontada » Marawaxadaha Francis
Warshad tamarta kuleylka ah ee Compostilla